Mooshin la hordhigay Gudoonka Golaha Shacabka. - Ogaden24 | Ogaden24
Mooshin la hordhigay Gudoonka Golaha Shacabka.
Sep 14, 2020 - Aragtiyood
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa ay gudoonka sare u gudbiyeen Mooshin,kaasi oo ku aadan in ajandaha lagu daro kiis Kufsi iyo dil aha oo ka dhacay Magaalada Muqdisho ee caasimada Dal;ka Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdi Shire Ciyaar jecel oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay dalbadeen in maanta ajandaha lagu daro oo qodabkaasi laga doodo balse uu godoonka golaha shacabku dib u dhigay kiiiskaas.
Gudoonka Golaha shacabka ayaa sheegay in Kiiskaas loo saarayo gudi farsamo dibna loo dhigo.
Cabdi Shire ayaa waxa uu laamaha amaanka ugu baaqay in kiiskaas ay si deg deg ah u baadhaan isla markaasna ay cadaalad helaan qoyskii ay ka geeriyootay Alle ha u naxariistee Xamdi Maxamed Faarax oo kufsi iyo dil loogu gaystay Digmada Waabari Dabaq ku yaal kadibna laga soo tuuray.